Global Voices amin’ny teny Espaniola sy ny Canal Solidario · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2018 3:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Shqip, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny folo taona lasa, Aprily 2008)
Nahatsikaritra “widget (haingo)’ kely miseho ao amin'ny tranonkala roa tonta ireo mpamaky ny Global Voices amin'ny teny Espaniola sy ny Canal Solidario vao haingana. Ny iray ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola dia mampiseho ny lahatsoratra farany avy amin'ny Canal Solidario. Ny “haingo” miseho ao amin'ny Canal Solidario dia mampiseho ireo lahatsoratra vaovao ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniôla ho an'ireo mpamaky.
Ity fiaraha-miasa ity dia ahafahan'ny olona maro mahazo fahafahana miditra amin'ny tranonkala roa tonta sy fahafahana hahafantatra momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny fikatrohana sy ny tontolon'ny bilaogy iraisam-pirenena.
Araka izany, inona ny Canal Solidario? Andeha jerena ny tenin'izy ireo manokana:
Ny Canal Solidario-One World (Tontolo Iray) dia tetikasam-pampitam-baovao izay nanolotra fidirana amin'ny vaovao sy ny fitaovana momba ny firaisankina, ny fiaraha-miasa, ny fandriampahalemana, ny zon'olombelona ary ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy amin'ny alalan'ny aterineto hatramin'ny taona 1999. Nampandrosoin'ny Fundación Chandra izany, miaraka amin'ny fanohanan'ny Fundación Un Sol Món de Catalunya.
Ny tetikasa Canal Solidario-OneWorld dia novolavolain'ny ekipa mpanao gazety nanana ny hevitry ny media ho toy ny milin'ny fiovàna mankany amin'ny fiarahamonina iombonana kokoa sy malalaka. Ny Canal Solidario-One World dia an'ny tambajotra iraisampirenena OneWorld, misy sampana 11 manerana an'izao tontolo izao ary fikambanana zanany mihoatra ny 1700.
Tsara ny manamarika fa manana sehatra tena mahaliana ny Canal Solidario, toy ny Entrevistas (tafatafa) miaraka amin'ireo olona izay mandray anjara mavitrika amin'ny hetsika ara-tsosialy sy ireo sehatra hafa mahaliana tahaka izany, La Lupa de los Conflictos (Ny vera mazavan'ny fifandonana) izay mandalina lohahevitra mampiadihevitra, sy ny Blogosfera (tontolon'ny bilaogy), izay misy ireo lahatsoratra avy amin'ny tontolon'ny bilaogy iraisam-pirenena asongadina isaky ny herinandro.
Azontsika antoka fa hahasoa ny mpamaky ity fifanarahana eo amin'ireo tranonkala ity satria hahita ny vaovaon'izy ireo sy safidy vakinteny hitombo amin'ny fomba toy izany izy ireo.